दुई डिएसपीलाई सेवाबाट हटाइयो नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २७ वैशाखगृह मन्त्रालयले दुई डिएसपीलाई सेवाबाट हटाएको छ । खबर नगरी लामो समय अनुपस्थित रहेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक/एक डिएसपीलाई केही दिनअघि सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको हो ।सेवाबाट हटाइएकामा नेपाल प्रहरीका डिएसपी डा. सागर सुवाल तथा सशस्त्र प्रहरी बलका डा. नितेश अर्याल छन् । भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी उनीहरूलाई गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हटाइएको हो । दुवैजना प्राविधिकतर्फका डिएसपी हुन् । उनीहरू अस्पतालमा कार्यरत थिए । उनीहरू बिदा नलिईकन लामो समयसम्म अनुपस्थित भएका थिए । सूचना निकाल्दा पनि हाजिर हुन नआएपछि उनीहरूलाई सेवाबाट हटाइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनायो । उता नेपाल प्रहरीका डिएसपी सुदर्शन थापाको राजीनामा पनि गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । व्यक्तिगत कारण देखाउँदै डिएसपी थापाले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजीनामा दिएका थिए । उनको सेवाअवधि तीन वर्ष मात्र बाँकी थियो । दुःख धेरै हुने तथा सेवा सुविधा कम हुने भन्दै प्रहरी संगठनमा जागिर छाड्नेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । केही महिनाअघि मात्र नेपाल प्रहरीका तीन डिएसपीले जागिर छाडेका थिए । डिएसपी जगदीश पोखरेल, सुरेन्द्र सिंह र विनोद खरेलले राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरूमध्ये पोखरेल र खरेल अमेरिका पुगिसकेका छन् । तल्लो तहमा पनि पेन्सनअवधि पुग्नेबित्तिकै जागिर छाड्ने चलन बढ्दै गइरहेको छ । एक वर्षमा पाँच सयभन्दा बढी प्रहरीले जागिर छाड्दै आएका छन् । Add new comment पशुपतिको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी
नीरज खड्का/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २६ वैशाखपशुपति क्षेत्रको फाहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भएको छ । परिवर्तन नेपाल प्रालि नामक एक एनजिओलाई कोषले नै रकम तिर्नेगरी फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाको जनशक्ति अपुग भएकाले निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालका लागि जिम्मेवारी दिन लागिएको कोषका प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर पराजुलीले बताए । परिवर्तन नेपालले ट्रायलका रूपमा तीन महिना काम गरेको र कोष सन्तुष्ट भएकाले उसैसँग सम्झौता गर्ने तयारी भएको पराजुलीले जानकारी दिए । प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले भने, 'शिवरात्रिका वेला करिब तीन महिना हामीले उनीहरूलाई काम गराई हेर्‍यौँ, जुन सन्तोषजनक छ । त्यसबापत हामीले परिवर्तन नेपाललाई एकमुष्ठ तीन लाख दिएका थियौँ ।' काम गराई हेर्नका लागि 'ट्रायल पिरियड' भनिए पनि कोषले उनीहरूलाई रकम तिरेको हो । पशुपति र आसपास क्षेत्रको फोहोरमैला उठाउन सो एनजिओले कोषसँग मासिक डेढ लाख रुपैयाँ माग गरेको कोषनिकट स्रोतले जनाएको छ । कोषसँग एकमुष्ठ रकम माग गरेको सो संस्थालाई पशुपति क्षेत्रआसपासका करिब तीन सय घरधुरी र तीन सय पसलसँग छुट्टै शुल्क उठाउने अधिकार पनि दिन लागिएको कोष स्रोतको भनाइ छ । महानगरपालिका, कोष र वडाका प्रतिनिधिहरूबीचको छलफलका आधारमा विनाप्रतिस्पर्धा सो जिम्मेवारी दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ । पशुपति मन्दिरको कोर क्षेत्रबाहेकको सात र आठ वडाको फोहोरमैलाको व्यवस्थापन महानगरपालिकाले नै गर्दै आएको थियो ।पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफँैसँग पनि फोहोरमैलामा काम गर्नकै लागि करिब ७० कर्मचारी रहेका छन् । फोहोरका कर्मचारी टे्रड युनियन भन्दै कामै गर्न छाडेपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको कोषका एक अधिकारीले बताए । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'जागिरबाट निकाल्न नसकिने र काम पनि नगर्ने भएपछि पशुपति क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नै भएन ।' कर्मचारीले काम नगर्ने र कोष नेतृत्वलाईर् एनजिओले प्रभावमा पार्ने एकैचोटि भएको ती अधिकारीको दाबी छ ।महानगरपालिकाले पनि निजी क्षेत्रलाई उपत्यकाको फाहोरमैला व्यवस्थापनमा सशुल्क काम गर्ने अनुमति नदिए पनि पशुपतिको मामिलामा भने अनुमति दिएको छ । महानगरपालिकाले दिएको अनुमति रहस्यपूर्ण भएको कोषका अधिकारीले बताए । महानगरको अनुमतिविना नै हरेक वडामा एनजिओहरूले भारी शुल्क लिएर फोहोरमैलामा काम गरिरहेका छन्, जुन गैरकानुनी हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो संस्थाले उठाउने फोहोर संकलनमा लागि निःशुल्क ठाउँ दिनुपर्ने, फोहोरमैला उठाउन महानगरकै गाडी प्रयोग गर्न दिइनेलगायत सहमति गर्ने तयारी भएको कोष स्रोतको भनाइ छ । 'साधन महानगरको, स्रोत कोषको अनि शुल्क पनि कोषले नै तिर्नुपर्ने अनौठो खालको सहमति गर्न लागिएको छ,' कोषसम्बद्ध अधिकारीले थपे, 'सम्पदामा निजी क्षेत्र पसाउने र कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ ।'पाशुपत क्षेत्रलाई सफा र हराभरा राख्ने उद्देश्यले मात्रै निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले बताए । निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको जिम्मेवारीलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले सहमतिकै आधारमा 'लेनदेन' हुने बताए । उनले भने, 'कोषलाई मात्रै घाटा पुर्‍याउने वा महानगरलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने भन्ने होइन । बरु निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने रणनीति बनाएका हौँ ।' Add new comment सरकारले आज दलहरूसँग छलफल गर्ने नयाँ पत्रिका काठमाडांै, २६ वैशाख सरकारले चुनावी माहोल सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचनको विषयमा राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार निर्वाचनको विषयमा प्रमुखसहित अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले डडेल्धुरामा रहेको टिम अस्पताल र जिल्ला अस्पताललाई एकीकृत गरी सय शय्याको उपक्षेत्रीय अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले सडक विस्तारका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुन बनाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा लुटिएका र हराएका हतियारबारे बुझ्न बनाइएको हातहतियार मौजुदासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत रहेको मातहतको सरकारी समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले ओमन र बहराइनमा राजदूतावास र चीनको गोन्जाउ सहरमा वाणिज्य दूतावास तत्काल स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने बजेट र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय बालकल्याण समितिकी कार्यकारी निर्देशक सिसम मल्ललाई बर्खास्तसमेत गरेको छ । विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लागेकी मल्ल फरार छिन् । बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको रिक्त सदस्य पदमा अशोकनाथ उप्रेती र लवनाथ श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । Add new comment कास्कीका १२ पत्रिका बन्द
नयाँ पत्रिकाकास्की, २६ वैशाख विभिन्न माग राखी मजदुर हडतालमा उत्रेपछि पोखराबाट प्रकाशित हुने १२ वटा पत्रिका बन्द भएका छन् । अखिल नेपाल सञ्चार छापाखाना र प्रकाशन मजदुर संघको हडतालका कारण बिहीबारबाट पत्रिका बन्द भएका हुन् ।संघमा आबद्ध मजदुरले स्थायी नियुक्ति पाउनुपर्ने, दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा गरिनुपर्ने, राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने आदि माग राखेर आन्दोलन थालेका हुन् । ओभर-टाइमको व्यवस्था हुनुपर्ने, दसैँ पेस्की पाउनुपर्नेलगायत ११ बुँदे माग राखेको संघका कास्की अध्यक्ष लीलाबहादुर घर्तीमगरले जानकारी दिए । उनले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म पत्रिका प्रकाशनमा अवरोध गर्ने बताए ।आफूहरूले लामो समयदेखि उल्लेखित माग राख्दै आएको भए पनि सधैँ पूूरा गर्ने आश्वासन मात्र पाएको बताए । मगरले भने, 'लामो समयसम्म कुर्दा पनि माग पूरा गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएपछि बाध्य भई काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।' वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ६ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ तोकेको भए पनि आफूहरूले मासिक तीन हजारमा काम गर्नुपरेको घर्तीमगरले बताए । उनले दुई सय ४० दिन काम गरेका मजदुरलाई स्थायी नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने भए पनि १७ -१८ वर्षदेखि एकै छापाखानामा काम गर्ने मजदुरले पनि नियुक्तिपत्र नपाएको बताए । उता, मुद्रण उद्योेग व्यवसायीले छापाखानामा काम गर्ने मजदुरलाई स्थायी नियुक्तिपत्र दिन नसकिने बताएका छन् । व्यावसायीले स्थायी नियुक्तिपत्रबाहेक अरू माग पूरा गर्ने भनेको भए पनि मजदुरले अस्वीकार गर्दै आन्दोलन थालेका हुन् । हाल पोखरामा ४५ वटा छापाखाना सञ्चालनमा छन् । ती छापाखानामा करिब दुई सय ५० मजदुर कार्यरत छन् । Add new comment थप लेखहरु...
सडकछेउका ग्यारेज हटाउन सुरु
अन्तरजातीय जोडीलाई दुव्र्यवहार
आगलागीमा १२८ घर खरानी
सर्‍यो स्ववियु चुनाव